Xaafadda Daarusalaam Ee Muqdisho Oo Si Weyn Looga Ciiday...
Xaafadda Daarusalaam ee Muqdisho oo si weyn looga ciiday…
Iyadoo maanta geyiga Soomaalida laga ciidayo maalinta 1aad ee Ciidul Adxa ayaa munaasabadeeda laga dareemay xaafadda Daarusalaam ee Magaalada Muqdisho.
Boqolaal ka mid ah dadka deegaanka iyo qaar kale oo magaalada isaga kala yimid ayaa Salaadda Ciidda ku oogay barxadda weyn ee Daarusalaam.
Xaafadan oo sanadihii ugu dambeeyay aad u dhismeysay ayaa waxaa ku yaala oo laga hirgeliyay beerta xayawaanaadka iyo goobaha carruurta lagu ciyaarsiiyo, dadka ayaana uga kala yimaado magaalada inteeda kale.
Wararka Maanta : Xukuumada Somaliland oo ka hadashay qaabka loo qaadanayo shaqaalaha...
Maalmaha Ciidaha waxay indhahagu qabanayaan damaashaadka quruxda badan ee halkaasi ka jira, waxaadna arkaysaa waalidiin badan oo carruurtooda ku ciyaarsiinaya goobaha u gaarka ah barbaarta.
Waalidiinta ayaa kuu sheegaya in ubadkooda ay farxadda ciidda dareemaan, marka ay waqti ku qaadanayaan xaafadaasi.
Maanta oo kale inta aad ku damaashaadeyso xaafadan ayaad dareemaysaa in mashquul iyo ciriiri badan uu ka jira beerta xayawaanaadka ee dadku u daawashada taggaan iyo goobaha ay carruurta ku ciyaaraan.
Wararka Maanta : Jubbaland oo shaacisay qodobadii ay isku fahmi waayeen ROOBLE - Caasim...
Daarusalaam oo lagu tilmaamo mid ka mida xaafadaha ugu bilicda wanaagsan ee Caasimadda Muqdisho ayaa waxaa soo badanaya dadka deegaanka ka sameysanaya, marka aad eegto amniga la isku haleen karo ee ka jira.
Ciidda Carafo oo sidoo kale ay Soomaalidu u garan ogtahay Ciid Wayneey waa Ciidda Labaad ee Islaamka uu leeyahay, waxayna geba-gabo u tahay taagnida Xujeyda ee Banka Carafo.
Ciidaha Fitriga iyo Adxa ayaa xuskooda iyo weynayntooduba laga dareemaa caalamka, gaar ahaan dunida Muslimka.
Wararka Maanta : Khilaaf saameyn xun yeeshay oo ka dhex-taagan talisyada ciidanka xoogg...
Ciidda Carafo ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa sanadkii 2aad oo xiriir ah, oo dunida uu halakeeyay fayriska safmarka ah ee COVID-19, Soomaaliya-se xaalkeeda waxa uu u muuqdaa mid degan.
Nagala soo xiriir Wararka Maanta
Habraaca doorashada Aqalka Sare oo lasoo saaray (Aqriso) – Caasimada O…
Madaxweyne ka badbaaday isku day dil xilli uu ku guda jiray Salaadda C…
Wararka Maanta : WHO oo ka digtay in la qaado xayiraadaha COVID-19 - Wararka Maanta:...
Wararka Maanta : Sawirro: Guddoonka guddiyo kale oo doorasho oo maanta lagu doortay MUQ...
Wararka Maanta : Turkiga oo badbaadiyey Tahriibayaal - Wararka Maanta: Somali News...
Wararka Maanta : Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka...
Wararka Maanta : La taliyaha arrimaha doorashada madaxweyne Farmaajo oo sheegay in loo...
Wararka Maanta : Wararkii ugu dambeeyey ee safarka Rooble ee Garbahaarey + Sawirro - Ca...
Wararka Maanta : Qarax xooggan oo caawa ka dhacay dekedda Dubai - Wararka Maanta